मेराे शेयरकाे पासवर्ड बिर्सिनुभयाे ? यसरी गर्नुस रिसेट - DURBAR TIMES
HomeEconomyमेराे शेयरकाे पासवर्ड बिर्सिनुभयाे ? यसरी गर्नुस रिसेट
मेराे शेयरकाे पासवर्ड बिर्सिनुभयाे ? यसरी गर्नुस रिसेट
आजकल हप्तैपिच्छेजस्ताे आइपिओ खुलिरहेकाे छ । लगानीकर्ताहरू पनि प्रत्येक आइपिओमा उत्तिकै चाख लिइरहेका देखिन्छन् । पछिल्लाे समय आइपिओ भर्नका लागि बैंकमा लाइन लाग्न नपर्ने तथा माेबाइलबाट नै आइपिओ भर्न मिल्ने भएपछि लगानीकर्ताहरू खुशी देखिन्छन् ।
सिडिएससि एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले आइपिओ भर्नका लागि मेराेशेयर वेभसाइट तथा माेबाइल एप्लिकेशन पनि सञ्चालनमा ल्याएकाे छ । डिम्याट खाता खाेलिसकेपछि डिम्याटलाइ मेराेशेयरमा कनेक्ट गर्नुपर्छ जसकाे लागि सम्बन्धित क्यापिटल तथा बैंकमा गएर मेराे शेयरकाे फारम भरेपछि इमेलमा युजरनेम र पासवर्ड आउँछ । जसबाट मेराेशेयर लगइन गरी आइपिओ भर्न सकिन्छ ।
मेराे शेयरमा लगइन गर्दा तपाइँले १०० चाेटीसम्म गलत पासवर्ड हाल्न पाउनुहुन्छ । त्यसपछि भने तपाइँकाे अकाउन्ट ब्लक हुन्छ । त्यसपछि अथवा मेराे शेयरकाे पासवर्ड बिर्सेमा कसरी रिसेट गर्ने ?
मेराे शेयरकाे पासवर्ड बिर्सेमा तपाइँले जहाँ तपाइँले मेराे शेयरकाे अकाउन्ट खाेल्नुभएकाे हाे त्यहाँ अथवा जुन क्यापिटलमा तपाइँले डिम्याट अकाउन्ट खाेल्नु भएकाे त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ गएर मेराे शेयरकाे पासवर्ड रिसेट गर्ने फारम भरी बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि कुनै शुल्क लाग्दैन ।
फारम भरेर बुझाइसकेपछि तपाइँकाे इमेलमा नयाँ इमेल आउँछ जसमा पासवर्ड रिसेट गर्ने लिङ्क दिइएकाे हुन्छ । त्यसमा क्लिक गरेर तपाइँले मेराेशेयरकाे नयाँ पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ ।
अब केही दिनमा सिडिएससिले मेराे शेयरमा नै फरगट पासवर्डकाे अप्सन पनि ल्याउने तयारी गरिरहेकाे जनाएकाे छ । त्यसपछि भने लगानीकर्ता याे झन्झटबाट मुक्त हुनेछन् ।
हाल अनलाइनबाट नै शेयर खरिद बिक्री गर्न मिल्ने भएपछि शेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूकाेभीड बढ्न थालेकाे छ । घरबाट नै शेयर किन्न तथा बेच्न मिल्ने भएपछि गृहिणी तथाविद्यार्थीहरूकाे पनि यसमा आकर्षण बढ्दाे छ । विदेशबाट समेत शेयर बजारमा काराेबारगरिरहेका लगानीकर्ताहरू देखिन थालेका छन् । यही सन्दर्भमा कतिपय लगा…
नेपालमा पछिल्लाे समय शेयर मार्केटमा लगानीकर्ताहरूकाे आकर्षण बढ्दै गएकाे छ । शेयरमार्केटकाे पुँजी र नयाँ कम्पनीहरूकाे आगमनसँगै बजार पनि ठूलाे बन्दै गएकाे छ। लगानी डुब्ने जाेखिम कम हुने तथा लगानी नै सानाे हुने भएकाले शेयर बजारकाे दाेश्राेबजारभन्दा प्राथमिक बजार बढी आकर्षित हुँदै गएकाे छ । पछिल्लाे…
Previous articleविप्लव र नेपाल सरकारबीच छुटेकाे चाैथाे बुँदा
Next articleओली समूहकाे संसदीय दलकाे बैठक बस्दै , वामदेव नजाने